नवजात शिशुले किन गर्दैनन् स्तनपान ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २२, २०७६ कला कोयू
अगस्ट पहिलो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तनपान दिवस मनाइने रहेछ भनी ४ वर्षअघि पहिलोपटक गर्भवती हुँदा मैले थाहा पाएँ । त्यसयता हरेक साल यो दिवस आउने–जाने क्रम छ । र, म यो दिवसलाई नियालिरहेकी छु । सन् १९९१ बाट यो दिवस सुरु भएको हो । मैले महसुस गरेको र नउठेको विषय हो– अप्ठ्यारामा परेका आमाहरूका समस्या ।
मलाई हरेकपटक स्तनपानको चर्चाले एकचोटी नमिठोगरी चिमोट्छ । पहिलो बच्चाको समयमा म नयाँ, केही पनि थाहा थिएन । मलाई लाग्थ्यो, स्तनपान गराउनु प्राकृतिक कुरा हो र मैले पनि यो कुरा सजिलै गर्नेछु, जसरी यो स्तनपान सप्ताहले प्रचार गरिरहेको छ । तर पहिलो छोरीको बेला स्तनपान गराउन मैले करिब एक महिना जुन संघर्ष गरेंँ, त्यो मेरालागि आजसम्मकै गाह्रो काम हो । मेरी छोरीले दूध चुस्नै मानिन, चुस्न सकिन । उनले मेरो दूध खाइनन् । मैले छोरीसँग ३० दिनसम्म स्तनपान गराउन लडाइँ गरेँ र हारेँ । त्यसपछि मैले उनलाई पूर्णरूपमा फर्मुला अर्थात बट्टाको दूध दिन थालेँ ।
४ वर्षपछि दोस्रो सन्तान हुँदा पनि स्तनपान गराउन मैले उस्तै पीडा भोगेँ । पहिल्यै समस्या भोगिसकेको कारण दोस्रो बच्चाको समयमा स्तनपानको निम्ति मेरो तर्फबाट सक्दो तयारी गरेकी थिएँ । डाक्टर मित्रहरूसँग सक्दो छलफल गरेँ । इन्टरनेटमा पाएसम्मका जानकारी पढेँ । स्तन विभिन्न प्रकारका हुँदारहेछन् । स्तनको प्रकार अनुसार स्तनपान गराउन सजिलो र गाह्रो हुने रहेछ । मेरो आफ्नो स्तन बच्चालाई खान असजिलो हुने प्रकारमा पर्नेरहेछ भन्ने बुझेँ । त्यसलाई सुल्झाउन विदेशबाट औजारहरू मगाएर प्रयोग गरेँ । यति गरेपछि मेरो दोस्रो बच्चाले दूध चुस्यो ।
बच्चा जन्मेपछि डाक्टर तथा नर्सहरू सिर्फआफ्नो दूध खुवाउनुस् है भन्छन्, तर मद्दत शून्य सरह । डाक्टरलाई समस्या राख्दा चुसाइरहनुस्, भोक लागेपछि खान्छन् भन्छन् । नर्सहरू फर्मुला नदिनुस्, बच्चाको बानी बिग्रन्छ मात्र भन्छन् । आमा भएका नर्सहरूले केही मद्दत गरे नि आमा नबनेका नर्सहरू ‘दोस्रो बच्चा ? दूध खुवाउन पनि नजान्ने’ नजरले मलाई हेर्थे ।
‘ल्याक्टेसन कन्सल्ट्यान्ट’ भन्ने पनि हुँदारहेछन् भनेर दोस्रो बच्चाको पालासम्म आइपुग्दा थाहा भयो । दूध खुवाउन नसकेपछि मेरो बच्चाको डाक्टरलाई कोही ‘ल्याक्टेसन कन्सल्ट्यान्ट’सँग सल्लाह लिउँ कि भनी अनुरोध गर्दा उनले आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको ठानिन् । उनकै असंवेदनशीलता र लापरबाहले मेरो बच्चाको शरीरमा खाना तथा तरल पदार्थको कमीले रगतमा इन्फेक्सन देखियो ।
३ वर्षयता म तराईका गाउँहरूमा पुग्दा मैलेजस्तो स्तनपान गर्न, गराउन नसकेका धेरैजना भेटेकी छु ।
स्तनपान गराउन जति सजिलो छ भनी प्रचार गरिन्छ, सबैको हकमा त्यो त्यति सजिलो छैन । बच्चाले दूध चुसेन, आमाको दूधको मुन्टो छैन, दूध आएन, दूध आए नि बच्चालाई पुग्नेगरी आएन भन्ने मनग्गे समस्या हुने रहेछन् । स्तनपान गराउनेहरूको कुरा सुन्दा त्यो कति पीडादायी हुन्छ भन्ने अर्को पाटो छँदैछ ।
दूध गानिएर अपरेसनसम्म गर्नुपर्ने, बच्चाले धेरै चुसेका कारण दूधको मुन्टामा घाउ हुने र स्तनपान गराउन नसक्ने अवस्था पनि त हुँदोरहेछ । लौ, अरु त अरु बच्चा जन्मिँदै आमा गुमाउने बच्चालाई के खुवाउने ? बच्चाहरू ७/८ महिनामै पूर्ण विकास नभई पनि त जन्मन्छन् नि, त्यो अवस्थामा के गर्ने ? बुबाहरू जो घर बसेर बच्चालाई स्याहार्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई के उपाय सुझाउने ?
मेरो प्रश्न यस्ता अवस्थाका कारण स्तनपान गराउन नसक्ने आमा वा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण आमाको दूध खान नपाउने, नमिल्ने, नसक्ने अवस्थालाई यो स्तनपान सप्ताहले कहाँ सम्बोधन गर्छ ? यहाँ त स्तनपान नगराएका आमालाई नकारात्मक बिल्ला भिराउन सबैजना पुरापुर लागिपरेका देखिन्छन् ।
हाम्रो समाजमा बल्ल त बुवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सन्तान हुर्काउने काममा सहभागी हुनथालेका छन् । विमानस्थल जस्तो ठाउँमा स्तनपान कक्ष हुँदा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ठाउँमा स्तनपान गराउँदा कर्के नजर लगाउने, स्तनपान गराउने ठाउँ भए पनि स्तनपानको लागि चाहिने आसनमा बस्न मिल्ने ठाउँ हुँदैन । बच्चा रोयो भने दिग्दारी भरिएको नजरले हेर्छन् । सार्वजनिक यातायातमा बच्चा सहितको आमा चढे सिट छाड्नुको पीरले बच्चाको आमा त नचढे हुन्थ्यो नि भनेर मुख खोलेरै भन्न भ्याउँछन् । बच्चाप्रतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको भार आमाथि थुपारिन्छ ।
हामी बल्ल कामकाजी आमालाई ८० दिनको बिदाको कुरा गर्दैछौं, अनि ६ महिना पूर्ण स्तनपान गराऔं पनि भन्दैछौं । यो आफैमा बाझिने कुरो होइन र ? महिलालाई काम छाडेर बच्चा हुर्काउन लाग भन्या हो कि, काम गर्ने हो भने बच्चाको स्वास्थ्यको कुरा नगर भन्या हो ?
पढाइको सिलसिलामा एक वर्ष सिड्नी बस्दा बच्चा कसरी जन्माउने, उसलाई आफ्नो दूध कि फर्मुला खुवाउने निर्णय सिर्फ आमाको इच्छामा छाडिने रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । र स्तनपान गराउँछु भन्ने आमालाई हरसम्भव सहयोग गर्ने रहेछन् । बच्चाले दूध चुसेर निकाल्न सक्दैन भनेर पहिल्यैबाट आफ्नो दूध २/३ थोपा गर्दै संकलन गरेर स्टोर गर्न सिकाउँदा रहेछन् । बच्चा पाउनुभन्दा पहिल्यै स्तनपान गर्न प्रयोगात्मक कक्षा दिँदारहेछन् ।
बच्चाको हुनेवाला बाबुलाई के कसरी सहयोग गर्ने भनी विभिन्न कक्षा सञ्चालन गर्दारहेछन् । यति गर्दा पनि बच्चालाई आमाको दूध नआएमा अर्को आमाले दूध दान लिने र दिने व्यवस्था मिलाएका हुँदारहेछन् । काम गर्ने आमालाई ९ महिना तलबी विदा र थप १ वर्ष बेतलबी विदाको व्यवस्थासम्म हुने रहेछ । त्यहाँको सरकारले बच्चा जन्मेको घरमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था हेर्न स्वास्थ्यकर्मी पठाउँदो रहेछ ।
हाम्रो जस्तो भद्रगोल समाजमा आमामैत्री व्यवस्था कहिले हुन्छ थाहा छैन । मेरो अनुभवमा त यी सबै मेरो समाजमा कल्पना मात्र हो । र यो एकतमासको स्तनपान गराउँदा बच्चाको स्याहार पूर्ण हुन्छ, आमाबाबुको कर्तव्य पूरा हुन्छ, स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ भन्ने सपनाचाहिँ मलाई हाँसोलाग्दो लाग्छ । जबसम्म आमाको अप्ठ्यारो महसुस गर्ने संवेदना हुँदैन, आमा र बच्चाप्रति सहयोगी हातहरू बढ्दैनन्, सहयोगी नीति कार्यान्वयन हुँदैनन्, सहयोगी समाज र व्यवस्था बन्दैनन्, अरु सबै भन्ने कुरामात्र हुन् ।
लेखक उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयकोसमृद्धि कार्यक्रममा कार्यरत छिन् ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:१९
इंग्लिस प्रिमियर लिग : टक्कर सिटी र लिभरपुलकै
काठमाडाैं — इंग्लिस प्रिमियर लिग शुक्रबार सुरु हुँदै छ । यसपल्ट पनि उपाधिका दुई ठूला दाबेदार हुन, डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटी र उसलाई कडा चुनाैती पेस गर्ने लिभरपुल । फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले तयार पारेकाे दुई टिमकाे विश्लेषण :
इंग्लिस प्रिमियर लिगका पछिल्ला दुई सिजन म्यानचेस्टर सिटीका लागि गज्जब नै रह्यो । यसबीच सिटीले कमायो १ सय ९८ अंक । त्यसैले तय छ, टिममा कुनै ठूलो परिवर्तन आवश्यक छैन । यी दुई सिजन सिटीले ३० अंकमात्र गुमाएको थियो । यसबीचमा सिटीले इंग्लिस फुटबलमा एकछत्र राज गर्‍यो । गत सिजन भने उपाधिको होड निकै रोमाञ्चक रह्यो । सिटीले लिभरपुलसँग १ अंकको दूरीमा मात्र उपाधि जित्यो ।
के अपेक्षा गर्ने ?
एउटा तथ्य के निश्चित जस्तै छ भने म्यानचेस्टर सिटीलाई लगातार तेस्रो उपाधि जित्नबाट कसैले रोक्न सक्छ भने त्यो सायद लिभरपुलमात्र हुनसक्छ । म्यानचेस्टर युनाइटेडले सन् २००६/०७ देखि २००८/०९ बीच तीनपल्ट लगातार उपाधि जितेको थियो । सिटीको टिम खुबै सन्तुलित देखिन्छ । यसमा कमजोरी पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रतिभाशाली खेलाडी रहेका हुनाले टिममा उपाधि जित्ने भोक प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
टिममा यसपल्ट नदेखिने एकमात्र ठूलो परिवर्तन भनेकै बेल्जियमका डिफेन्डर भिन्सेन्ट कोम्पनीको अनुपस्थिति हो । गत सिजनको अन्त्यसँगै उनले इतिहादबाट एन्डरलेटको बाटो रोजे । क्लबमा ११ वर्षको सेवापछि । यसबीच उनी निकै राम्रा कप्तान भएर पनि निस्के ।
डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोडरी एटलेटिको म्याड्रिडबाट सिटी आएका छन् । यी २३ वर्षीय खेलाडीका लागि क्लबले कीर्तिमानी रकम तिरेको छ । प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाका लागि चोटबाट फर्केका केभिन डी ब्रुयने नयाँ खेलाडी जस्तै हुनेछन् ।
उनले गत सिजन चोटको कारण अधिकांस समय बेन्चमै बिताए । सिजनको सुरुआतमा ग्वार्डिओलालाई सोधिएको थियो, लिग सय अंक छोएर जितेपछि के गर्ने त ? उनको उत्तर थियो, इंग्लिस फुटबल इतिहासमै पहिलोपल्ट तीन उपाधि जित्ने । यो त पूरा भयो नै । यसपल्ट सिटीको लक्ष्य हुनेछ, युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जित्ने । गत सिजन सिटी टोटेनहमको हातबाट यस प्रतियोगितामा पराजित रह्यो । टोटेनहम त्यति बेला उपविजेता बन्यो ।
आइतबार मात्र सिटीले कम्युनिटी सिल्डको उपाधिका लागि ग्वार्डिओलाको टिमले योर्गन क्लोपको लिभरपुललाई टाइब्रेकरमा हराएको थियो । यो प्रतियोतिगा इंग्लिस फुटबल सिजन सुरुआतको संकेत हो । यसपल्ट लिगको उपाधिमा सिटीलाई चुनौती पेस गर्ने टिम पनि यही लिभरपुल नै हुनेछ । ग्वार्डिओला पनि मान्छन्, ‘उपाधिको भिडन्त हाम्रो र लिभरपुलबीच नै हो । हामी दुईलाई चुनौती दिने भनेको म्यानचेस्टर युनाइटेड, आर्सनल, चेल्सी र टोटेनहम नै हुन्छन् ।’
जति बेला टिममा सबै खाले खेलाडी छन् भने किन नयाँमा ध्यान दिने ? त्यसको उत्तरमा सिटीले भित्र्याएको छ, स्पेनी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रोडरी । उनी कीर्तिमानी रकममा एटलेटिको म्याड्रिडबाट सिटी आएका छन् । ‘मेरो लागि सिटीबाट खेल्नु ठूलो अवसर हो,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा ग्वार्डिओला विश्व फुटबलकै सबैभन्दा महान प्रशिक्षक हुन् ।’ उनलाई सर्जियो बुस्केट जस्ता खेलाडी मानिन्छ । उनी नै टिमका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन सक्छन् ।
पछिल्लो सिजन सिटीले अधिकांस समय केभिन डी ब्रुयनेबिना खेल्यो । सम्झनुपर्ने के छ भने उनी त्यस सिजनअघि प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए । गत सिजन लिग उपाधि जित्ने क्रममा २८ वर्षीय बेल्जियमका प्लेमेकर ओझेलमा जस्तै रहे चोटका कारण । उनले लिगका ११ खेलमात्र सुरुदेखि खेले । अहिले पूर्ण फिट मानिएका डी ब्रुयनेले आफ्नो प्रतिष्ठाअनुसार खेल्ने हो भने निश्चित छ उनी नै टिमका प्रमुख खेलाडी हुनेछन् ।
सन् १९९० देखि लिभरपुलले लिग उपाधि जित्न सकेको छैन ।यो नै क्लबको सबैभन्दा ठूलो दुःख र पीडाका रूपमा छ । योर्गन
क्लोपको लिभरपुलले गत सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेको थियो, तर नयाँ सिजन सुरु हुनअघि त्यसले लिगमा खासै अर्थ राख्ने छैन । लिभरपुलले शुक्रबार लिगको उद्घाटन खेलमा नर्विच सिटीको सामना गर्दै छ । यो सँगै सुरु हुनेछ, टोलीको एक अर्को उपाधि जित्ने अभियान ।
गत सिजन लिभरपुल उपाधिको होडमा निराश रहेको हुनुपर्छ । ९७ अंक बटुलेर पनि आखिरमा म्यानचेस्टर सिटीपछि दोस्रो स्थानमा रहनुपर्छ भने के भन्ने र ? यो यति धेरै अंक हो कि पछिल्ला दुई सिजनबाहेक यतिको प्रदर्शनले प्रत्येकपल्ट प्रिमियर लिग उपाधि जित्न पर्याप्त हुन्छ । गत सिजन क्लोपको लिभरपुलले एकै खेलमात्र गुमायो । यो संयोगले सिटीविरुद्ध इतिहादमा जनवरीको खेल थियो । यो निकै महँगो साबित भयो ।
यसै हारबाट लिभरपुलले अन्ततः लिग उपाधि जित्न सकेन । त्यो हारको पीडा बिर्संदै लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग भने जित्यो । टोटेनहमलाई फाइनलमा २–० ले हराएर च्याम्पियन भयो । युरोपेली फुटबलमा उपाधि जित्ने त लिभरपुलको बानी जस्तै हो । उसको रगतमै यो गुण छ । तर लिभरपुलको यस सिजनको पनि सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हुनेछ, लिग जित्ने । यसक्रममा गत सिजन घरेलु फुटबलको सबै तीन उपाधि जित्ने म्यानचेस्टर सिटीलाई पछाडि छाड्ने ।
लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग जितेलगत्तै ग्वार्डिओलाले क्लोपलाई फोन पनि गरे बधाई दिन । त्यति बेला क्लोप भन्थे, ‘हामीले एकअर्काविरुद्ध के वाचा गर्‍यौं भने आउँदो सिजन हामी अझ चर्को प्रतिस्पर्धामा हुनेछौं ।’ त्यसको झल्को आइतबारको कम्युनिटी सिल्डमा पनि देखियो । त्यसको पहिलो हाफमा सिटीको प्रभुत्व रह्यो । दोस्रो हाफमा भने लिभरपुल चम्किएको थियो । नतिजा टाइब्रेकरबाट भयो । तय भयो प्रतिस्पर्धा साँच्चै चर्को नै हुनेछ ।
यसअघिका तीन सिजनमा लिभरपुलले २८ करोड डलर खर्च गरेको थियो नयाँ खेलाडीका लागि । यस्तोमा लिभरपुल यस सिजन
चुपचापजस्तै रह्यो । क्लोपले यसपल्ट दुई नयाँ खेलाडी किनेका छन् । यी दुवै संयोगले किशोर नै छन् । लिभरपुलले डच डिफेन्डर १७ वर्षे सेप भान डेन बर्गलाई जेवेलेबाट ल्याएका छन् । यस्तै उनले फुलहमका १६ वर्षीय मिडफिल्डर हार्भे इलियटलाई पनि अनुबन्ध गरेर आफ्नो खेलाडी बनाएको छ । टिमले भिर्जिल भान डायक र मोहम्मद सलाहलाई भने नयाँ अनुबन्ध दिएको छ ।
इजिप्टका मोहम्मद सलाहले युरोपेली च्याम्यिन्स लिगको फाइनलमा टोटेनहमविरुद्ध सुरुमै गोल गरे । पेनाल्टीबाट उनले गरेको त्यो गोलसँगै आफ्ना आलोचकको मुख बन्द गर्न पनि सफल रहे । यी २७ वर्षीय खेलाडी गत सिजन लिगमा संयुक्त रूपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी पनि रहे । एनफिल्डमा यी खेलाडी यसपल्ट पनि लिभरपुलका लागि प्रमुख खेलाडी हुनेछन् । उनले गत सिजन २२ गोल गरे । ८ खेलमा सहयोगी भूमिका निभाए । यसपल्ट पनि उनीबाट यस्तै आस हुनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:०६